Madaxweyne Farmaajo oo ku wajahan Gaalkacayo kadib booqashadiisii Puntland – Bosaso Times News
admin January 13, 2018 Madaxweyne Farmaajo oo ku wajahan Gaalkacayo kadib booqashadiisii Puntland2018-01-13T06:56:29+00:00 Puntland, somali News No Comment
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku wajahan maanta magaalada Gaalkacayo una sii gudbiya dhinacaas iyo Galmudug halkaas oo ay booqasho uu ku marayo deegaanada Galmudug uga bilaabanayso.
Madaxweyne Farmaajo oo ilaa 7dii bisha Janaayo ku sugnaa Puntland ayaa shalay xariga ka jaray xarunta maareynta shirkadda Golis ee magaalada Boosaaso iyo Internetka xawaaraha ee Fibre Obtic oo asagana shirkadda Golis hirgelinayso.
Madaxweyne Farmaajo ayaa booqashadiisa ku tilmaamay u kuurgal xaalada dalka iyo nabadeynta dadka Soomaaliyeed iyo inuu arko sida wanaagsan ee horumarka leh gaar ahaan reer Puntland ay dalkooda u dhisteen.
Madaxweyne Farmaajo oo dhulka u dhexeeya Boosaaso iyo Garoowe maray ayaa aad uga helay sida wanaagsan ee horumarka uga jiro iyo nabada Puntland wuxuuna amaanay shacabka iyo dawladda Puntland sida wada jirka ah ee ay horumarka iyo nabada uga qaybqaateen asagoona u rajeeyey Soomaalida inteeda kale inay sidaan oo kale gaaraan dalkana laysku xiro asaga oo nabad ah.
Dadweynaha reer Puntland yar iyo weyn uma kala harin soo dhoweynta madaxweynaha dawladda Federaalka waxayna tuseen sida ay ugu heelan yihiin hogaankiisa ayna u rajeynayaan inuu hawsha wanaagsan siiwado iyaga oo ugu duceeyey inuu Alle la garab galo hawsha adag ee hortaal. Madaxweynuhu wuxuu la kulmay intuu Puntand joogay dhalinyarada, odayaasha, waxbaradka, ganacsatada, siyaasiyiinta iyo bulshada qaybaheeda kala duwan asaga oo xog wareysanayey si uu u ogaado guud ahaan hamiga iyo rabitaanka dadka Soomaaliyeed.
http://www.bosasotimes.com/madaxweyne-farmaajo-oo-ku-wajahan-gaalkacayo-kadib-booqashadiisii-puntland/http://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2018/01/farmajoBosGolis2-1024x683.jpghttp://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2018/01/farmajoBosGolis2-150x150.jpg 2018-01-13T06:56:29+00:00 adminPuntlandsomali NewsBoosaaso,Farmaajo,Ganacsatada,Golis,Puntland,SCMadaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku wajahan maanta magaalada Gaalkacayo una sii gudbiya dhinacaas iyo Galmudug halkaas oo ay booqasho uu ku marayo deegaanada Galmudug uga bilaabanayso. Madaxweyne Farmaajo oo ilaa 7dii bisha Janaayo ku sugnaa Puntland ayaa shalay xariga ka jaray xarunta maareynta shirkadda Golis...admin siyaadyusuf@hotmail.comAdministratorBosaso Times News
Boosaaso, Farmaajo, Ganacsatada, Golis, Puntland, SC
« Madaxweyne Farmaajo oo si diiran loogu soo dhoweeyey magaalada ganacsiga ee Boosaaso
Madaxweyne Farmaajo oo dagaxdhigay wadada xeebta Qandala Boosaaso inta uusan Puntland ka bixin »